Niile Banyere Ịzụlite Ntanetị Business na UAE - Olee otú ime ya?
Ụlọ ọrụ Dubai City - Ihe niile Banyere Nbudata Business na UAE
A na-ehibe azụmaahịa ndị dị n'ụsọ maka nzube nke ịrụ ọrụ na mpụga obodo ebe edebanyere aha ya. Azụmaahịa azụmaahịa, n'aka nke ọzọ, nwere ike ịdị na obodo dị elu ụtụ isi ma ọ bụ onye nwere ụtụ dị ala ma ọ bụ nke efu. Fọdụ mba, ọkachasị ndị nọ na United Arab Emirates, nwere iwu ụlọ ọrụ pere mpe na ụgwọ nchịkwa agafeghị oke - Nke a na-eme ka ha nwee mmasị n’ebe ndị mmadụ nọ onye ga acho iguzobe ulo ahia.
Yabụ, na-ekwupụta n'ozuzu ya, yana dịka iwu si dị, azụmaahịa dị n'azụ ahịa kwesịrị inwe onye nnọchi anya nke na-eme dị ka njikọ dị n’etiti gọọmentị na azụmaahịa. Ọtụtụ mmadụ na-amalite azụmaahịa ndị dịpụrụ adịpụ n'ihi ụtụ dị ala, nnwere onwe pụọ n'ụkpụrụ steeti, ịdị mfe nke ịme azụmahịa mba ofesi, na ego a na-enweta na ntanetị ego site na mba.
Iwu maka Mbido Business na UAE
Tupu ịtọlite ​​azụmaahịa gị dị oke osimiri, na-ekwukarị, a ga-agbaso usoro ụfọdụ:
Opekata mpe mmadu abụọ, onye ndu, na onye nwe ihe.
Enweghị ego kachasị mkpa achọrọ. A ghaghị inye òkè niile ma kwụọ ụgwọ.
Onye ụlọ ọrụ ahụ ga-ahọrọ onye nnọchitere aha. Na UAE Free mpaghara nyere ndepụta nke ndị ọrụ a.
Ị nwere ike mepee ụlọ akụ akụ na ụba na steeti.
Ego ego a na-enyocha adịghị mkpa, ma na ụfọdụ, ha nwere ike ịchọrọ.
Taxtụ ụtụ isi na 100% dị ugbu a yana 100% Inwere ikike ịnabata ala ọzọ.
Ebee ka mmadụ malitere ?. Tupu ị guzobe azụmaahịa dị n'ụsọ mmiri, ị ga-enwerịrị akaụntụ akụ nke mba ọzọ. Ga-achọ paspọtụ dị irè, nkwupụta ego ụlọ akụ ọnwa isii, na ụdị ego akara zọrọ ezo nke ukwuu. Mgbe ịmepe akaụntụ, ịnwere ike ịga n'ihu ma nyefee akwụkwọ maka ịmepe ụlọ ọrụ na-ahụkarị.
Tupu ịmalite ntọala azụmaahịa, enwere ụfọdụ ihe ịchọrọ ị ga-eme. Dịka ọmụmaatụ, aha ụlọ ọrụ. Aha kwesiri ịkọwa ihe ụlọ ọrụ ahụ bụ. Aha azụmaahịa ahụ kwesịrị ịkwụsị na njedebe ma ọ bụ tinye ya.
Ọ bụrụ na i nweela aha, ị kwesịrị ị na-elele na ndekọ maka odikwa. Ndị nwere oke nwere ike ịbụ ụlọ ọrụ iwu ma ọ bụ ndị mmadụ. Enweghị mmachi na-adabere na amaala amaala ma ọ bụ ebe obibi. Edemede na akara ngosi banyere mkpakọrịta ahụ. Ekwesịrị ịdebanye yana data ndekọ niile gbasara ndị ejiri akụ na-abụghị nke ọha.
Ndị niile na - eketa oke gụnyere onye isi ga-enyefe akwụkwọ ikike inweta paspọtụ ha yana ezigbo ezigbo akaebe ebe obibi. Ndị a nwere ike ịbụ nkwupụta akaụntụ ụlọ ọrụ mbụ na ụgwọ ụgwọ. Ha kwesịkwara itinye akwụkwọ nnabata izizi ụlọ akụ.
Uru nke idozi Business Offshore na UAE
Enwere ọtụtụ uru iji guzobe azụmaahịa a na-ahụkarị. Na akụkụ dị mma, n'okpuru bụ ụfọdụ n'ime ha:
Enwere ikike ikike ị nweta ego maka nchekwa nke ụlọ ọrụ ndị dị n'ụsọ mmiri. Ọzọkwa, nke a na-enye ikpo okwu siri ike ma nwee ntụkwasị obi nye ndi n’enwe ego dika atulere ndi obodo. Nchedo a maka ndị na - enyere ndị mba ọzọ aka na - enyere ha aka iwu "mgbidi iwu" nke na - egbochi akụ nke ụlọ ọrụ n'aka ndị na - agbaziri ha ego.
Businesseslọ ahịa ndị dị n’okpuru na-elele nzuzo anya na enwere ike iduzi azụmahịa na nzuzo. Ọzọkwa, ụlọ ọrụ achụmnta ego ahụ achọghị igosipụta ndekọ ọha na eze nke ndị nduzi na ndị nwere ọrụ. Nke a na - eme ka o kwe ndị ọchụnta ego na ndị ọchụnta ego si gburugburu ụwa iji hazie ụdị azụmaahịa a.
Ulo oru ahia di n'ime UAE bụ ụtụ isi n'efu; nke a pụtara na ndị azụmaahịa na-enweta nloghachi zuru oke. Nke a na-agba ndị ọzọ metụtara aka itinye ego na mpaghara, yabụ, na -eme ka akụ na ụba ka mma na uru ahịa. Ewezuga ịbụpụ ụtụ isi, steeti na-enyekwa ohere inweta azụmaahịa ala ọzọ zuru oke.
N'ihe banyere ịchụso iwu, ị ga - echekwa akụ gị. Ikike mpụga na-ahụ maka na etinyere ya na ụkpụrụ omume; agbanyeghị, na ikpe nke usoro iwu, a na-echekwa akụ gị.
Ọ dịghị mkpa ka azụlite azụmahịa azụmaahịa n'ụzọ anụ ahụ; ọ nwere ike ịbụ na ụdịdị. N'agbanyeghị nke a, ọ nwere ike ịnwe ụlọ nwere ụlọ ọ bụrụhaala na ha dị nke ndị ikike dị mkpa kwadoro.
Azụmaahịa ndị dị n'èzí bụ ngwa ngwa ịdebanye aha na ịtọlite. Ọ baghị uru maka ndị investors itinye aka na ndị ọchịchị; onye na - edebanye aha ya nwere ike ịmechaa usoro ahụ site na ịnweta akwụkwọ ntinye aka site na onye itinye ego na ọfịs ya n'ọfịs ya.
Ihe ndekọ ego ụlọ akụ nke ụlọ ọrụ ndị dị n'èzí mepere emepe nwere mgbanwe dị ukwuu ma nwee ike ịnabata ọtụtụ ego. Nke a na - eme ka ọ dịrị ndị ahịa mfe ịnyefe ego mba ofesi site na usoro dị iche iche dị ka nnyefe waya ma ọ bụ site na ndị na-akwụ ụgwọ ịntanetị.
Ihe ndị a machibidoro
Ọ bụ ezie na ị na-eduzi oke osimiri azụmahịa na UAE bụ mgbanwe, enwere ụfọdụ ihe omume ị na-agaghị eme.
Mmụta n'etiti ndị ọzọ.
Settọlite ​​azụmaahịa a na-ahụ anya na-eme ka ọ dị mfe site na iwu na ihe ndị achọrọ etinye. Na ezi nnọchite, akwụkwọ, na isi obodo; will ga-adị njikere ịtọ ebe azụmaahịa nke aka gị. N’agbanyeghi na enwere ụdị azụmaahịa ndị mba ọzọ na-enweghị ike ịtọha enweghị ike iji ha tụnyere ọtụtụ ohere ndị ọchụnta ego si mba ọzọ mepere. Ya mere, gaa n'ihu ma malite azụmahịa gị taa !.
N'akụkụ aka nke ọzọ, ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịkwado CV na Dubai Ụlọ ọrụ Dubai City nwere obi ụtọ inyere gị aka.
Citylọ ọrụ Dubai City n'aka nke ọzọ, na-enye ugbu a ezigbo ntuziaka maka ndị na - achọ Job na Dubai na Abu Dhabi. Ndị otu anyị, na-asụkarị, kpebiri itinye ozi maka asụsụ ọ bụla maka anyị Ndị njem Dubai. Ya mere, na nke a n'uche, ị nwere ike inweta nduzi, ndụmọdụ na ọrụ na United Arab Emirates na asụsụ nke gị.